Indlu eNtofontofo eneNetflix kulo lonke igumbi!
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguBen
Indlu enefenitshala yangoku, eneTV kwigumbi ngalinye! Ifanelekile kumaqela oonokontraka okanye iintsapho ezijonge ukubaleka! Indawo yokupaka enikezelweyo ngaphandle kwepropathi enokufikelela ngokukhawuleza eMorrisons, Greggs, Subway, Pharmacy kunye noPapa Johns.
Ilali yaseDolophini yaseLawley yindawo entle yokuhlala enezinto ezintle zalapha ekhaya kunye nokuba kufuphi neeVenkile zeTelfords, iiPaki zoShishino kunye neM54.
Igumbi lokulala eli-3 elibekwe kakuhle ngaphezulu kwemigangatho emi-3. Ikhitshi elifakwe ngokupheleleyo kubandakanya zonke izinto ezilindelekileyo. IiTV zeSkrini ezisicaba kwigumbi ngalinye elineNetflix ibandakanyiwe. Ilungele amaqela amashishini ajonge iilets zexesha elifutshane okanye amaqela abakhenkethi kwindawo yokuhlala ngempelaveki.
Igumbi lokuhlambela eli-1 elixhotyiswe ngokupheleleyo elineeTowels kunye nezinto zangasese. I-WC eyongezelelweyo kumgangatho ophantsi.
Iindawo ezithengisa ukutya kunye neziselo ngaphakathi kwemizuzu yokuhamba umgama, kubandakanya iMorrisons, iGreggs, indawo yokutyela yeenkomo zaseMadlelweni, iintlanzi kunye neeChips, kunye neNkutshi yeNkukhu. 24/7 Naliphi na ixesha leGym yoFitness nakumnyango wakho.
Ukufikelela ngokulula kuM54, kwisikhululo sikaloliwe iTelford Central 10 imizuzu yokuqhuba ngokufikelela ngokukhawuleza eWolverhampton naseBirmingham. Kufuphi kakhulu kwidolophu eyimbali ye-Ironbridge kwaye kumgama omfutshane wokuqhuba weendawo ezinkulu zomtshato.
IBarrack House ime ngokufanelekileyo kufutshane nendawo yokuthengisa yangoku eLawley, eTelford ukuze ilungele zonke iimfuno zakho. Kunye noGreggs, Morrisons, The Grazing Cow Restaurant, Chicken Cottage, Papa Johns, LyfBar kunye neFish kunye neeChips zonke ngaphakathi kohambo lwemizuzu emi-2! Kukwakho neKhemesti, 24/7 Naliphi na ixesha loMzimba woQoqosho, kunye neLayisensi eOff-ilayisensi zonke zifikeleleka ngokulula kunye nemizuzu nje ukusuka kumnyango wakho wangaphambili!
Ukufikelela ngokulula kwi-M54, kwaye ikwimizuzu nje eli-10 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseTelford, iyonke iShropshire isemnyango wakho.
Silishishini leNdawo yokuHlala eSebenzisiweyo kwaye sikhona ukunceda nangayiphi na indlela esinokuyenza ngayo!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Telford